Ngaba Zonke Iindlela Zokunqula Ziyafana Yaye Zamkelekile KuThixo? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChitonga IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Akunjalo, azifani iindlela zokunqula. IBhayibhile inemizekelo eliqela yeendlela zokunqula ezingathandwayo nguThixo. Nantsi apha ngezantsi.
Eyokuqala: Ukunqula oothixo bobuxoki
IBhayibhile ithi ukunqula oothixo bobuxoki, ‘ngumphunga,’ ‘ngamampunge,’ ‘nento engekhoyo.’ (Yeremiya 10:3-5; 16:19, 20) UYehova * uThixo wathi kumaSirayeli amandulo: “Uze ungabi nathixo bambi ngokuchasene nam.” (Eksodus 20:3, 23; 23:24) Athi amaSirayeli akunqula abanye oothixo, “wavutha umsindo kaYehova.”—Numeri 25:3; Levitikus 20:2; ABagwebi 2:13, 14.
UThixo akakatshintshi nangoku, akafuni nokubabona “abo babizwa ngokuba ‘ngoothixo.’” (1 Korinte 8:5, 6; Galati 4:8) Uyalela abo bafuna ukumnqula ukuba bohlukane nabantu abanqula aba thixo, esithi: “Phumani phakathi kwabo, nizahlule.” (2 Korinte 6:14-17) Ukuba zonke iindlela zokunqula ziyafana yaye zamkelekile kuThixo, kutheni ke ekhupha lo myalelo?
Eyesibini: Ukunqula uThixo oyinyaniso ngendlela angayamkeliyo
Ngamanye amaxesha, amaSirayeli ayenqula uThixo esebenzisa iinkolelo neendlela ezazisetyenziswa ekunquleni oothixo bobuxoki, kodwa uYehova akazange ayamkele le nto yokuba kuxutywe unqulo lokwenyaniso nolobuxoki. (Eksodus 32:8; Duteronomi 12:2-4) UYesu wazikhalimela iinkokeli zonqulo zemihla yakhe ngenxa yendlela ezazimnqula ngayo uThixo; zazizenza oongcwele-ngcwele ebantwini ‘kodwa ziyigatya imibandela enzima ngakumbi yoMthetho, eyile, okusesikweni nenceba nokuthembeka.’—Mateyu 23:23.
Nakule mihla, ekuphela konqulo olunceda abantu basondelelane noThixo lusekelwe kwinyaniso. Le nyaniso ifumaneka eBhayibhileni. (Yohane 4:24; 17:17; 2 Timoti 3:16, 17) Unqulo oluneemfundiso ezingqubanayo neBhayibhile lubabhekelisela kude abantu kuThixo. Iimfundiso ezininzi abantu abacinga ukuba zisuka eBhayibhileni—ezifana nemfundiso yokuba uThixo uneziqu ezithathu, ukungafi komphefumlo nokuthuthunjiswa esihogweni—zivela kubantu ababenqula oothixo bobuxoki. Unqulo oluneemfundiso ezinjalo ‘lulilize,’ okanye aluncedi nganto, ngoba lubangel’ ukuba kulandelwe izithethe kunokuba kulandelwe iindlela zikaThixo.—Marko 7:7, 8.
UThixo akabathandi abahanahanisi. (Tito 1:16) Ukuze unqulo luncede abantu basondelelane noThixo, akufuneki lube nezithethe nje kuphela kodwa lumele lusebenze kuzo zonke izinto abazenzayo. Ngokomzekelo, iBhayibhile ithi: “Ukuba umntu uzibona engumnquli ofanelekileyo ukanti engalubambi ngomkhala ulwimi lwakhe, kodwa eqhubeka ekhohlisa intliziyo yakhe, unqulo lwakhe luphuthile. Unqulo oluhlambulukileyo nolungadyobhekanga ngokwembono kaThixo noBawo wethu lulo olu: ukuvelela iinkedama nabahlolokazi embandezelweni yabo, nokuzigcina ungenabala kulo ihlabathi.” (Yakobi 1:26, 27) Xa ichaza olu hlobo lonqulo lucocekileyo, lungadyobhekanga nolungenaluhanahaniso, yona iBhayibhile yesiXhosa ka-1996 isebenzisa igama elithi “inkolo enyanisekileyo.”
^ isiqe. 5 UYehova ligama loThixo wokwenene eliseBhayibhileni